Agaasimihii madaxtooyada Qeybta Warfaafinta oo la badelay iyo mid cusub oo loo magacaabay
Home » WARARKA MAANTA » Agaasimihii madaxtooyada Qeybta Warfaafinta oo la badelay iyo mid cusub oo loo magacaabay	Agaasimihii madaxtooyada Qeybta Warfaafinta oo la badelay iyo mid cusub oo loo magacaabay
20/03/2017	981 Views Xil ka qaadistan ayaa timid, kadib markii uu amar ku bixiyay Madaxweyne Farmaajo in la bedelo Shador Xaaji, iyadoo lagu bedelay Agaasime cusub.
Agaasimaha cusub ee Warfaafinta Madaxweynaha ayaa loo magacaabay Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah nin dhalinyaro ah, kana mid ahaa raggii qeybta weyn ka qaatay ololihiisa dhinaca warbaahinta iyo mida baraha bulshada.
Shador xaaji ayaa lagu wadaa in xil kalr loo bedelo oo ka mid ah Hey’adaha dowladda, maadaama sharciga shaqaalaha rayidka dowladda uu dhigayo qofka marka xil laga qaado ama meel laga bedelo loo wareejiyo meel kale.
Sidoo kale is bedel ayaa lagu sameeyay qeybta Warfaafinta Madaxtooyada,
wali waxaa ka socota kala shaandheynta xilalka iyo baal-siibka lagu haayo xubnihii horay ula soo shaqeeyay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous: Dowladda Qadar oo maanta howl muhiima ka qabatay Muqdisho
Next: Ra’iisul-wasaare Kheyre oo la filayo in uu maanta ku dhawaaqo xukuumadda cusub